Ogaden News Agency (ONA) – Shir bileedkii jaaliyadda Perth oo lagu falanqeeyay arima quseeya halganka iyo fal-dambiyeedkii ka dhacay Nairobi
Shir bileedkii jaaliyadda Perth oo lagu falanqeeyay arima quseeya halganka iyo fal-dambiyeedkii ka dhacay Nairobi
Posted by ONA Admin	/ February 3, 2014
Waxaa shalay oo taariikhdu ahayd 2/2/2014 ka qabsoomay magaalada Perth shirkii bilaha ahaa ay jaaliyadu ku gorfayn jirtay hawlihii jaaliyada u qabsoomay mudadaas iyo waxaan u qabsoomin. Shirka ayaa la bilaabay abaarihii 4 galabnimo waxaana furay gudoomiyaha jaaliyada Perth halgame Asad Cabdulahi oo ka qaybgalayaasha shirka aad ugu bogaadiyay wax-qabadka iyo mintidnimadu ku jirto isagoo uga mahadnaqay xubnaha jaaliyadda siday goor walba iyo saacad walba iyo xaalad walba ay diyaarka ugu yihiin taageerada shacabkooda halganka ugu jira siday heeryada gumaysiga isaga dulqaadi lahaayeen oo dhulka Ogaadeeniya looga xorayn lahaa cadawga.
Furitaanka soo dhaweynta ahaa ee Gudoomiyaha jaliyadda ka dib, sidii caadada shirarka S.Ogaadeeniya u ahayd waxaa lagu furay aayadaha quraanka kariimka iyo wacdi diin ah oo uu soo jeediyay sheekh Axmed Dalmar isagoo ku dheeraaday in Cahdiga aad gasho ood ka soo baxdo uu ka mid yahay camalada suuban isagoo aad u ifiyay halganka Ogaadeeniya ka socda xaqnimadiisa oo qofkii ka qayb qaatana uu ajir iyo xasanaad badan ka heli. Wuxuu raaciyay in umadda Ogadenya ay xor u tahay inay masiirkeeda ka tashato heshana madax banaani taama.
Shirkan oo ka xamaasad kululaa shirkii hore ee isaga la midka ahaa oo ku soo beegmay xili uu gumaysiga macangaga ee Itoobiya ka af-duubay masuuliyiin ONLF waddanka Kenya ee Nayrobi, kuwaas oo halkaa ugu sugnaa arima la xidhiidha wada hadal dhex mara ONLF iyo Itoobiyo oo la filayay inuu dib u furmo. Falkan ka baxsan akhlaaqda dawliga ayay xubnaha jaliyadda ay ka muujiyeen cadho aad u kulul.
Waxaa kaloo shirka qudbad aad u qiimo badan oo ku wajahnayd xaalada halganku marayo iyo fashilka gumaysiga ka soo jeedeyay madasha shirka afhayeenka ONLF naftii hure Cadaani Hiirmooge isagoo si waafiya uga hadlay sababta uu gumaysigu madaxda u afduubay taasoo uu ku tilmaamay inay tahay guuldarada ka soo gaadhay gudo iyo dibadba. w
Waxaa xubnuhu ay gudoomiyaha ay waydiiyeen su’aalo halganka ku saabsan oo uu si waadixa uu uga wada jawaabay in ka dib waxay xubnihii wacad ku mareen inay halganka sii laba jibaarayaan inta guusha kama dambaysta Laga gaari shirkiina farxad iyo rayn rayn ku soo gaba gaboobay